(တပ်မတော်နှင့် KIA အဖွဲ့တို့ ဇန်န၀ါရီလ အတွင်း ကချင်ပြည်နယ် ဟူးကောင်းဒေသ၊ မြစ်ဆုံ အထက်ပိုင်းရှိ မလိခမြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်း ကြောတွင် တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယင်းတိုက်ခိုက် မှုများ အရှိန်လျှော့ချဖို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဌာန၊ အမှတ် (၁) စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့ (က . စ . ထ)မှူး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်နှင့် KIO ဥက္ကဋ္ဌ အင်ဘန်လတို့သည် တရုတ်ပြည် ယူနန်ပြည်နယ်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်က တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ယင်း တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်အောင် တရုတ်ပြည်က ကြားဝင် စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ ဤအချက်က မြန်မာနိုင်ငံမြောက် ပိုင်း အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အပေါ် တရုတ်ပြည်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ် တရုတ်ပြည်၏ သြဇာကြီးထွားလာနေပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး Asia Times ပါ Bertil Litner ၏ China Looms Large Over Myanmar War and Peace ဆောင်းပါးကို ကောက်နုတ်ဘာသာပြန် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။)
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများအပေါ် တရုတ်ပြည်၏ သြဇာတိက္ကမကြီးထွားလာနေပါသည်။ ယင်းအချက်က နဂိုမူလရှုပ်ထွေးပြီးသား ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုခက်ခဲရှုပ်ထွေးစေပါသည်။ မြန်မာ အရပ်သားအစိုးရနှင့် တပ်မတော်အာဏာပိုင်များက တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲများ မစတင်မီ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနှင့် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်ရပ်စာချုပ် (NCA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဟု တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်က ၎င်းသည် ‘DDR’ကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်သည်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြား ထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ disarmament (လက်နက်ဖျက် သိမ်းခြင်း)၊ demobilization (စစ်မှုထမ်းအဖြစ်မှ နုတ် ထွက်ခွင့်ပြုခြင်း)နှင့် reintegration (ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခြင်း)တို့ ဖြစ်ကြသည်။ DDR ကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက လက်နက်ချခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ၎င်းတို့က NCA လက်မှတ် မရေးထိုးမီ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပရမည်ဟု တုံ့ပြန်အဆိုပြုကြသည်။
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုကို အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများက ထောက်ခံကြသည်။ ၎င်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးခိုင်မာစေရန် ငြိမ်းချမ်းရေးမုချလိုအပ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်နှင့် သြစတြေးလျတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ပုံအောကူညီခဲ့ကြသည်။
တဘက်တွင် အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံ၌ မဟာဗျူဟာ အကျိုးစီးပွားများကြီးကြီးမားမားရှိနေသော တရုတ်ပြည်က မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသများ တည်ငြိမ်စေချင်သည်။ ငြိမ်းချမ်းစေချင်သည်။ သို့ရာတွင် တရုတ်ပြည် ဖြစ်စေချင်သည်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အနောက်အုပ်စုနိုင်ငံများမျှော်မှန်းသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးပုံစံမဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရုတ်အစိုးရ၏ သဘော ထားနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကျွမ်းတ၀င်ရှိကြသော အကဲခတ်သမား များက တရုတ်ပြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏နယ်စပ်များတွင် မဟာဗျူဟာမြောက်တည်ငြိမ်မှုကို လိုလားသည်။ ယင်းမှာ တရုတ်ပြည်က ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး တရုတ်ပြည်၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးမည့် မဟာဗျူဟာ မြောက်တည်ငြိမ်မှုမျိုးဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ နယ်စပ်ဒေသများတွင် စစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီး ဒုက္ခသည်များ တရုတ်နယ်မြေအတွင်းသို့ လှိမ့်ဝင်လာခြင်းသည် တရုတ်ပြည်၏ အကျိုးစီးပွားမဟုတ်သည်မှာ သိသာထင်ရှားပါ သည်။ တချိန်တည်းတွင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် DDR လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ပါက UWSA အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပေါ် တရုတ်ပြည်၏ လက်ရှိသြဇာတိက္ကမလျော့ပါး သွားမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်အစိုးရသည် ၎င်း၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ရင်း မြန်မာအစိုးရနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပေါ်ရှိပြီးသား ယင်း သြဇာတိက္ကမကို နှစ်ရှည်လများအသုံးပြုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၌ အဓိကအခြေစိုက်သော တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ (၇)ဖွဲ့သည် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (FPNCC) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ဧပြီလတွင် ယင်းအုပ်စုက ဖက်ဒရယ်သို့ ဦးတည်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရန် တောင်းဆိုချက်တရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခဧရိယာအားလုံးမှ မြန်မာတပ်ဖွဲ့များ ရုပ်သိမ်းပေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။
UWSA ဦးဆောင်သည့် FPNCC အဖွဲ့တွင် KIA, TNLA, SSA, MNDAA, NDAA နှင့် AA အဖွဲ့တို့ ပါဝင်ကြသည်။ တရုတ်ပြည်သည် FPNCC အပေါ် သြဇာရှိသည့် တခုတည်းသော တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်သည် ၎င်း၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် FPNCC ကို ထိန်းချုပ်အသုံးချနေသည်။ တရုတ်ပြည်၏ အကျိုးစီးပွားများတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောက်ဖြူရေနက်ဆိပ်ကမ်းနှင့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် ပြီးစီးရေးတို့ ပါဝင်သည်။ ယင်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ထရီလီယံ ကုန်ကျခံအကောင်အထည်ဖော် မည့် တရုတ်ပြည်၏ 'ရပ်ဝန်းတခု၊ လမ်းကြောင်းတခု' အခြေခံ အဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွင် အဓိက ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်သည်။
ကျောက်ဖြူဆိပ်ကမ်းနှင့် ပိုက်လိုင်းများသည် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်နေသောနေရာများနှင့် အလှမ်းဝေး ကွာစွာတည်ရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် မူဆလင် ဘင်္ဂါလီ ၆၀၀ယ၀၀၀ ကျော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်သို့ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည့် ဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်းက မည်သို့ဆိုစေ တရုတ်ပြည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့ သည်။ အကယ်၍ ဘင်္ဂါလီစစ်သွေြးွကများ အင်အားပြန်စုပြီး လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းမှုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် တရုတ်ပြည်၏အကျိုးစီးပွားများ ထိခိုက်နိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ပြည်၏ အကြံအစည်၊ ရည်ရွယ်ချက်များကို အနောက်အုပ်စု နိုင်ငံများ အနေနှင့် အပြည့်အ၀နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိမှုက ၎င်းတို့ထိုက်ထိုက်တန်တန် ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် အင်န်ဂျီအို များနှင့် ၎င်းတို့ငြိမ်းချမ်းရေးဇောင်းပေးထားသည့် ပဏာမခြေလှမ်းများဘေးရောက်သွားခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း၊ အမျိုးသမီးများနှင့် အခြားမဲပေးပိုင်ခွင့် မရှိသော အုပ်စုများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအရ မှန်ကန်ပုံရသော စီမံချက်များကို ထောက်ပံ့ရန်အနောက်အုပ်စု အလှူရှင်များက ရန်ပုံငွေမြောက်မြားစွာပေးအပ်နေစဉ် တရုတ်ပြည်သည် ၎င်း၏ အဓိကအကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန် အင်အားနိုင်ငံရေးကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ကစားနေခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲများ အမြန်ဆုံး နှင့် အပြီးသတ်ဖြေရှင်းချက်တရပ်ရရှိရေးသည် တရုတ် အစိုးရ အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပုံမရပေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအနေနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ မတိုင်မီ NCA လက်မှတ်ထိုးရမည်ဆိုသော ယခင်အစိုးရ၏ ပင်မမူဝါဒအား အပြောင်းအလဲ မလုပ် ခဲ့ပေ။ လက်နက်ကိုင်သူပုန်များ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုသောအုပ်စုများက NCA ကို လက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆိုနေကြသည်။ ယင်းအခြေအနေက တရုတ်ပြည်ကို အကြိုက်တွေ့စေဖွယ်ရှိသည်။ FPNCC အဖွဲ့တွင် အင်အားအကောင်းဆုံးနှင့် လက်နက်အကောင်းဆုံး UWSA ကို တရုတ်ပြည်၏ ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်မျှသာ ဖြစ်သည်ဟု မရှုမြင်သင့်သော်လည်း မြေပြင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်များ၊ အမြောက်ကြီးများနှင့် သံချပ်ကာ တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်များ အပါအ၀င် ၎င်း၏လက်နက်အားလုံးသည် တရုတ်ပြည်မှ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
UWSA ခေါင်းဆောင်များသည် တရုတ်ပြည်နှင့်နီးစပ်မှုရှိပြီး တရုတ်အစိုးရထံမှ အကြံဥာဏ်များရယူမည်မှာ သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေ။ FPNCC ၏ တန်ပြန်ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်ကို တရုတ်အစိုးရက နှုတ်မှဖွင့်ဟ မပြောသော်လည်း အနည်းဆုံးတော့ ထောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ သြဂုတ် ၂၄ တွင် FPNCC က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တရုတ်ပြည်က ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ရန် မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း ကြေညာချက်တရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အနောက်အုပ်စုသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သူ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်ရန် NGO များနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် အားကိုးနေရစဉ် တရုတ် ပြည်သည် အနောက်အုပ်စုနှင့်အပြိုင် ၎င်း၏အကျိုးစီးပွားကိုဖော်ဆောင်ရန် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ၏ ပါဝါကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာ ထိန်းချုပ်အသုံးချနေပါသည်။
Ref;(Asia Times: China Looms Large over Myanmar War and peace by Bertil Litner.)